Agaasimihii Madaxtooyada oo is casilay | Keydmedia
Agaasimihii Madaxtooyada oo is casilay
Ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo sababta rasmiga ah uu isku casilay Agaasimihii Madaxtooyada.
MUQDISHO, Soomaaliya - Warar lagu kalsoonaa karo oo ay heshay Keydmedia Online ayaa sheegaya in uu is casilay Agaasimihii Madaxtooyada Soomaaliya Dr Nuur Diiriye Fursade oo ka mid ahaa xubnahii aadka ugu dhow Madaxweyne Farmaajo.
Wararka ayaa sheegaya in Dr Fursade uu is casilaaddiisa kadib garoonka Aadan Cadde ka dhoofay, isagoona u duulay dalka Canada, uu ka heysto dhalasho labaad iyo degaanasho rasmi sida ila wareedyo xaqiijinayaan.
Sababaha rasmiga ah ee is casilaaddiisa lama sheegin, balse wararka ayaa intaa ku daraya in uu isku casilay arin isaga u gaar ah sida aan xogta ku helnay.
Dr Fursade oo muddo hal Sano ah hayay xilka Agaasimaha madaxtooyada ayaa ka mid ahaa xubnaha aadka loogu saadaalinayay in loo magacaabayo xilka Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dalka oo bedelaya booskii Xasan Cali Kheyre, balse lama oga is casilaaddiisa iyo ku hungoobidda arintaan in ay xiriiraan.
Waa Agaasimahii shanaad ee loo magacaabay xilka Agaasimaha madaxtooyada, tan iyo markii la doortay madaxweyne Farmaajo February 2017, waxaana xusid in Dr Fursade uu ka mid ahaa shaqsiyaadka saaxiibka dhow la ahaa madaxweyne Farmaajo.
Keydmedia Online ayaa isku dayday in ay arrintaan wax ka weydiiso xafiiska Madaxweynaha, walina Jawaab ayaan ka sugeynaa.